ရဲမေများမှ ရာထူးတိုးရန် ကာမလာဘ်ထိုးမှုကြောင့် စိတ်ရောဂါခံစားရ၍ ပြန်လည်တရားစွဲ ဆိုဖွယ် ရှိကြောင်း ရဲရာထူးခန့်ချုပ် ပြော – Zartiman
တနည်းအားဖြင့် ပြောရရင် သူတို့ကသာ ကျနော့ကို လိင် အမြတ်ထုတ် အခွင့်အရေး ယူသွားတာဖြစ်လို့ ကျနော့ဘက် က တရားစွဲ သင့် တယ် လို့ ယူဆမိ ပါတယ်… ဒါ့အပြင် ကျနော့အနေ နဲ့ တပ်မတော်ကိုစတင် ဝင်ရောက်စဉ်ကနေ အသွင်ပြောင်းပြီးရဲရာထူးခန့်ချုပ်ဖြစ်လို့ အခင်းမဖြစ်ပွားခင်အချိန်ထိ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ပကတိကျန်းမာ ခဲ့ပေမဲ့ ။
အခုလိုတိုင်တန်းမှုတွေဖြစ်မှ ရုတ်ချည်းစိတ်ဝေဒနာသည်ဘဝရောက်ရတာဟာ အဲ့ဒီ ၁၈ ယောက် နဲ့ အိပ်ပြီးမှ ဖြစ်လာ ရတာကြောင့် ကျ နော့ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုဖြစ်ရ တဲ့ တရားခံ ဟာ အဲ့ဒီ ၁၈ ယောက်ကြောင့် ဆိုတာ ထင်ရှားသိသာ တဲ့ အတွက် သူတို့ကို တရားစွဲဖို့ စီစဉ်တာဖြစ်တယ်’ လို့.…ရဲရာထူးခန့်ချုပ် ဇော်မိုးသန်း မှ ပြန်လည်ပြော ဆိုထားကြောင်း သိ ရသည် ။
ရဲ ရာထူး ခန့်ချုပ် ဇော်မိုးသန်း အနေဖြင့် ၎င်းအား တိုင်ကြား ထား သည့် ရဲမေ ၁၈ ဦးအပေါ် ကာမလာဘ်ထိုးမှု အပါအဝင် စိတ်ရောဂါဖြစ် ပေါ် ခံစားရမှု တို့အတွက် တရားစွဲ ဆိုဖွယ် ရှိကြောင်း ရဲရာထူးခန့်ချုပ်ဇော်မိုးသန်းနှင့် နီးစပ်သူများ ထံ မှ သိရသည် ။ ထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက် ၍ ဦးဇော်မိုးသန်း အားမေးမြန်းရာ ၎င်းမှ ယခုလိုဖြေကြားခဲ့ ပါသည်-
“ညည်း တို့ ရာထူးတိုး လိုချင် ရင်တော့ ငါနဲ့ လာအိပ်ရမယ် လို့ နောက်ပြောင် ကျီစယ်တဲ့ သဘော နဲ့ ကိုဌေးဦး လိုပဲ လွှတ်ခနဲ ပြောမိ လိုက် ရုံပါ..”. ဒါကို သူတို့က အတည်ပြောတယ် ထင်ပြီး ရောက်လာတော့ လည်း ကိုယ့်ကုသိုလ် နဲ့ ကိုယ်ပဲလေ လို့မှတ် ယူလိုက်လျော ခဲ့တဲ့ သ ဘောပါပဲ….ဟု ပြောဆိုကြောင်း သိရသည်။
ရဲမမြေားမှ ရာထူးတိုးရနျ ကာမလာဘျထိုးမှုကွောငျ့ စိတျရောဂါခံစားရ၍ ပွနျလညျတရားစှဲ ဆိုဖှယျ ရှိကွောငျး ရဲရာထူးခနျ့ခြုပျ ပွော
တနညျးအားဖွငျ့ ပွောရရငျ သူတို့ကသာ ကနြော့ကို လိငျ အမွတျထုတျ အခှငျ့အရေး ယူသှားတာဖွဈလို့ ကနြော့ဘကျ က တရားစှဲ သငျ့ တယျ လို့ ယူဆမိ ပါတယျ… ဒါ့အပွငျ ကနြော့အနေ နဲ့ တပျမတျောကိုစတငျ ဝငျရောကျစဉျကနေ အသှငျပွောငျးပွီးရဲရာထူးခနျ့ခြုပျဖွဈလို့ အခငျးမဖွဈပှားခငျအခြိနျထိ ကိုယျရောစိတျပါ ပကတိကနျြးမာ ခဲ့ပမေဲ့ ။
အခုလိုတိုငျတနျးမှုတှဖွေဈမှ ရုတျခညျြးစိတျဝဒေနာသညျဘဝရောကျရတာဟာ အဲ့ဒီ ၁၈ ယောကျ နဲ့ အိပျပွီးမှ ဖွဈလာ ရတာကွောငျ့ ကြ နော့ရဲ့ စိတျကနျြးမာရေးခြို့ယှငျးမှုဖွဈရ တဲ့ တရားခံ ဟာ အဲ့ဒီ ၁၈ ယောကျကွောငျ့ ဆိုတာ ထငျရှားသိသာ တဲ့ အတှကျ သူတို့ကို တရားစှဲဖို့ စီစဉျတာဖွဈတယျ’ လို့.…ရဲရာထူးခနျ့ခြုပျ ဇျောမိုးသနျး မှ ပွနျလညျပွော ဆိုထားကွောငျး သိ ရသညျ ။
ရဲ ရာထူး ခနျ့ခြုပျ ဇျောမိုးသနျး အနဖွေငျ့ ၎င်းငျးအား တိုငျကွား ထား သညျ့ ရဲမေ ၁၈ ဦးအပျေါ ကာမလာဘျထိုးမှု အပါအဝငျ စိတျရောဂါဖွဈ ပျေါ ခံစားရမှု တို့အတှကျ တရားစှဲ ဆိုဖှယျ ရှိကွောငျး ရဲရာထူးခနျ့ခြုပျဇျောမိုးသနျးနှငျ့ နီးစပျသူမြား ထံ မှ သိရသညျ ။ ထိုကိစ်စနဲ့ပတျသကျ ၍ ဦးဇျောမိုးသနျး အားမေးမွနျးရာ ၎င်းငျးမှ ယခုလိုဖွကွေားခဲ့ ပါသညျ-
“ညညျး တို့ ရာထူးတိုး လိုခငျြ ရငျတော့ ငါနဲ့ လာအိပျရမယျ လို့ နောကျပွောငျ ကြီစယျတဲ့ သဘော နဲ့ ကိုဌေးဦး လိုပဲ လှတျခနဲ ပွောမိ လိုကျ ရုံပါ..”. ဒါကို သူတို့က အတညျပွောတယျ ထငျပွီး ရောကျလာတော့ လညျး ကိုယျ့ကုသိုလျ နဲ့ ကိုယျပဲလေ လို့မှတျ ယူလိုကျလြော ခဲ့တဲ့ သ ဘောပါပဲ….ဟု ပွောဆိုကွောငျး သိရသညျ။